युक्रेनका कप्तानले उठाए बियरको बोतल | युक्रेनका कप्तानले उठाए बियरको बोतल – हिपमत
उत्तरी मेसिडोनियाविरुद्ध आफ्नो देशलाई २–१ को जित दिलाएपछि युक्रेनका कप्तान आन्द्रे यार्मोलेन्को निकै खुसी देखिए । उनले आफ्नो खुसी दर्शाउने क्रममा पत्रकार सम्मेलनमा कोककोला र बियरको बोतल उठाए ।
पत्रकारहरुलाई उनले खेलपछि सोधे, ‘के म केही गर्नसक्छु ? रोनाल्डोले कोकाकोलाको बोतल हटाएको मैले भर्खरै देखेको छु । म कोकाकोलालाई यहाँ राख्छु । म हेनीकेन (बियर) लाई त्यसको ठिक अगाडि राख्छु ! मलाई सम्पर्क राख्नुहोला ! ’
पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध २–० ले पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै खेल बराबरी गरेपनि अन्तिम यसमा गएर उनको टोली पराजित भएको थियो । उत्तरी मेसिडोनियाविरुद्ध २–१ को जितपछि अब युक्रेनको दोस्रो चरण पुग्ने ढोका खुलेको छ । युक्रेनलाई जित दिलाउने क्रममा कप्तान यार्मोलेन्कोले एक गोल गरे भने अर्को गोलका लागि पास पनि मिलाइदिए । अब, अन्तिम खेलमा अस्ट्रियालाई हराउन सके युक्रेनले दोस्रो चरणको यात्रा गर्नेछ । news source :- Ratopati
सन् २०३२ को ओलम्पिक खेलकुद हुने भयो अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा
कोरोना को महामारीको कारण ओलम्पिकमा खेलाडीलाई हात मिलाउन र गला लगाउन पनि नपाउने
मेसीको आधा तलब घट्ने
ऋषभ पन्तसहित २ खेलाडीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि
युरो कपको गोल्डेन बुट पोर्चुगिज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई